pfSense 2.2.2: FreeBSD distro yekushandisa Firewall | Linux Vakapindwa muropa
Takatotaura kare mune ino blog nezve IPCop, kugoverwa kweGNU / Linux kunoitirwa kuita kuti network yako ive yakachengeteka, iwe uchazozivawo m0n0wall, iyo yekupedzisira yakavakirwa paFreeBSD. Zvakanaka, ikozvino tinokupa iwe pfSense, yeFreeBSD-yakavakirwa system kuita seFirewall uye Router. Iyo yakavhurwa sosi uye inogona kuiswa pamakomputa mazhinji.
Yayo yekumisikidza yewebhu interface inoyeuchidza chaizvo IPCop kana m0n0wall. Iyo chirongwa chakatangwa mu2004 na Chris Buechler naUllrich Scott seforogo kana kubva kune m0n0wall. Yaitarisa yaive paPC uye kumisikidza seva, zvichipesana ne m0n0wall, iyo yakagadziridzwa zvakanyanya kune yakaderera-zviwanikwa makomputa uye akaisirwa masisitimu.
Ne pfSense unogona kuva ne yemahara uye yakachengeteka kwazvo firewall kune yako network, inochengetedzwa neBSD Perimeter timu yekuvandudza. Ichokwadi ndechekuti ine zvishoma zvekugodora mamwe mabhizimusi ekubhadhara mhinduro senge Cisco, SonicWall kana Jupiter. Uye kana iwe uchifarira iwe unofanirwa kudaro kurodha pasi kubva kune yepamutemo saiti.
Iye zvino vaburitsa pfSense 2.2.2 vhezheni ine yakawanda yekuvandudza. Pakati pekuvandudzwa pane mashandiro, kururamisa kwekukanganisa kwekuchengetedza uye kugadzirisa mune akabatanidzwa mapakeji. Imwe yedzinogadziriswa yekuchengetedza zvikanganiso inokanganisa iyo IPv6 module, imwe yacho inobata iyo OpenSSL raibhurari, iyo yanga iine yazvino yekuvandudza kugadzirisa zvigamba zvingangoshandiswa nevamwe kuita kurwisa kweDoS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » pfSense: yakanakisa kugovera yekushandisa iyo Firewall
Ndatenda zvikuru nemupiro: D
Q4OS 1.2 "Orion", inowanika iyo nyowani vhezheni yeiyi distro nemabatiro eXP